मतदाता परिचयपत्र दस दिनभित्र छापिसक्ने | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
मतदाता परिचयपत्र दस दिनभित्र छापिसक्ने
काठमाडौँ, चैत २२ गते । २०७४ वैशाख ३१ गते आइतबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतदाता परिचयपत्रको छपाइ सोमबार सुरु भएको छ । आयोगको कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै परिचयपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले डोल्पा जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं. १० का मतदाता सुनकुमारी खत्रीको परिचय नम्बर १०५४०५७९ को मतदाता परिचयपत्र सार्वजनिक गर्दै परिचयपत्र छपाइको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । मतदाता खत्रीको जनप्रभा उच्च माविमा मतदान केन्द्र छ ।
छपाइ गर्ने जिम्मा पाएको ओम्नी गु्रपका अध्यक्ष तुलहरि सिंहले १० दिनमा छपाइ कार्य सक्ने जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्रको चारैतिर सिल्ड भएकाले नभाँचिने र १० वर्षसम्म चल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिघन्टा ६५ देखि ७० हजार प्रति तयार गर्न सकिने र दैनिक सातदेखि १० लाख मतदाताको परिचयपत्रको छपाइ गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइका लागि तीन सेवामा गरी ६०० कर्मचारी खटाइएको उहाँले बताउनुभयो । परिचयपत्र छपाउनका लागि तीनवटा छपाइ मेसिन र ३६ वटा लेमिनेसन मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यस्तै लेमिनेसनका लागि थप २२ वटा मेसिन जगेडामा राखिएको छ ।
व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले आइतबारदेखि नै मतदाताको नामावली पनि छपाइ सुरु गरेको थियो । मतदाताको नामावलीमा पनि मतदाताको तस्बिर
अङ्कित हुनेछ । - गोरखा
4/04/2017 11:58:00 AM